January 13, 2021 - Padaethar
ကိုယ်ချစ်နေရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း စိတ်ဝင်စားလာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း(၅)မျိုး
January 13, 2021 by Padaethar
လူတစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ ကိုယ်ဘက်ကနေစပြီး တိတ်တိတ်လေး သဘောကျနေရတဲ့ crush ဆိုတာ ရှိတတ်ကြစမြဲပါ။ တစ်ချို့က crush ဆိုတာကို တစ်သက်လုံး တိတ်တိတ်လေး ကြိတ်သဘောကျတတ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ တိတ်တိတ်လေးချစ်နေရုံနဲ့အားမရလို့ ကိုယ် crush နေရတဲ့သူနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ကို မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်နော်။ ဒီတော့ ဒီလိုမျိုး ကိုယ် crush နေရတဲ့သူ ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေသုံးရမယ်ဆိုတာကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁)သူနဲ့ရင်းနှီးမှု ရယူပါ ပထမဆုံး အနေနဲ့ ကိုယ် crush နေရတဲ့သူနဲ့ ရင်းနှီးမှုရမှ အဆင့်တက်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ခုလိုခေတ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးသွားဖို့ဆိုတာ မခက်ခဲပါဘူးနော်။ Online ပေါ်တက်ရှာလိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့် crush ရဲ့ information တွေကိုအလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူနဲ့အဆင်ပြေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရင်းနှီးမှုနဲ့ စတင်ရပါမယ်။ … Read more
Categories အချစ်ရေး Leaveacomment
ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင် မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ် အပြောအဆိုတွေက ထဘီထဲကမထွက်ဘူး
ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင် မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ် အပြောအဆိုတွေက ထဘီထဲကမထွက်ဘူး ကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကား ညစ်ညမ်းမှအထာကျတယ် ထင်နေကြတယ် ။အင်္ဂလိပ်စကား ညှပ်သုံးရင်တောင် What the Fuck နဲ့ Fuck You Bitch ပဲပြောတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် တန်ဖိုးမထားတာ ဘယ်ယောက်ျားကမှလဲ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး ။ အနား အားပေးတဲ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဝိုင်းပြီးပင့်ပေးနေတဲ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် ကိုယ်ပေါင်းတဲ့ တခြားသူတွေကလဲ အဲ့လို အသုံးအနှုန်းလောက် ကိုအရမ်းဂေါ်တယ်လို့ တလွဲတွေးနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလို အောက်လုံးတွေ ပြောနေတဲ့ မိန်းကလေးက အလွယ်ရမယ်ဆိုတာ ယောက်ျားတိုင်း သိတယ်။ဘာရရ စားမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေလောက်ပဲ ရလိမ့်မယ်။ဒါကို ဆရာကျတယ် ထင်ရင် ညေးတို့ မှားလိမ့်မယ်။ သုတ်ကြောင်တွေကလွဲရင် နှုတ်ရိုင်းတဲ့မိန်းကလေး ဘယ်သူမှ … Read more
Categories ဘဝနှင့် ပညာပေး Leaveacomment
တနင်္ဂနွေ ကို ဘာလို့ တနင်္ဂနွေလို့ ခေါ်ရတာလဲ…စနေ ကို ဘာလို့ စနေ လို့ ခေါ်ရတာလဲ..” ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်း ခုမှသိတော့တယ်
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်ုပ်တို့ လူကြီးတွေကို မေးဖူးတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ “တနင်္ဂနွေ ကို ဘာလို့ တနင်္ဂနွေလို့ ခေါ်ရတာလဲ..။ စနေ ကို ဘာလို့ စနေ လို့ ခေါ်ရတာလဲ..” စသည်ဖြင့်ပါ။ အကြောင်းအရင်းတော့ ရှိရမှာပေါ့..။ နောက်ပိုင်း ကျောင်းဆရာဘဝနဲ့ မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ့သမိုင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ မြန်မာဘာသာစကားပညာရှင် ဆရာကြီး ဦးဖိုးလတ် ရဲ့ “မြန်မာအစ” ဆိုတဲ့ စာပေတွေမှာ နေ့ရက်တွေရဲ့ … အမည်တွေကို ရေးသားထားတာတွေ့လို့ အနာဂတ် မြန်မာလူငယ်လေးများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ တနင်္ဂနွေနေ့ မြန်မာအယူအဆမှာ တနင်္ဂနွေ ဟာ နေမင်းကြီးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နေ့ပါပဲ..။ ပုဂံကျောက်စာ များမှာ.. “တန်နှင်ကုနုယ်၊ တန်နှင်ကုနွေ၊၊ တန်နှင်ကနွေ” ဟု ပါရှိတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ “တန်နှင်” ကို … Read more
သင့်အချစ်ရေး ကံကြမ္မာ ကောင်းမကောင်း သိနိုင်ဖို့ ( အခုပဲကြည့်လိုက်ပါ )
အချစ်ရေးကံကြမ္မာ ကောင်းမကောင်း သိနိုင်ဖို့ ဒီနှစ်ထဲမှာ အချစ်ရေးပြေလည်မလား၊ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေမလား၊ ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်မလား ချစ်သူအသစ်တွေ့ဦးမလား ချစ်သူနဲ့ ကွဲမလားဆိုတာတွေ မသိချင်ဘူးလား အဲဒီလိုနှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေ ကြိုတင် သိချင်သူတွေအတွက် သက်ရောက် ဟောကိန်းလေးတွေကို ပြောပြပါ့မယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျ။ လက်ဆန်းဗေဒင် နားလည်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဘယ်သက်ရောက်လဲသိပေမဲ့ ဗေဒင်နဲ့မရင်းနှီးရင်တော့ တွက်ပုံတွက်နည်းပြောပြပါ့မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့မွေးနံသိဖို့တော့ လိုမှာပါ။ ဒါတွေသိပြီးရင်တော့ သိချင်တာလေးတွေ ကြိုတင်ပြီးသိနိုင်ပါပြီ၊ တစ်ခုပြောချင်တာက မိမိက ဒီနေ့အသက်၂၀ တင်းတင်းပြည့်ပြီဆိုပါစို့ဗျာ။ မနက်ဖြန်ဆို အသက် ၂၁ထဲရောက်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အသက်၂၁နဲ့ တွက်ရမယ်ပေါ့။ တွက်ကြည့်ကြရအောင် – ပထမဦးစွာ သက်ရောက် ၈မျိုးကို အရင်သိရပါ့မယ်။ ဒါမှလဲ ဘယ်သက်ရောက်မှာ ဘာဖြစ်မယ်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၁။ တနင်္ဂနွေ သက်ရောက် ၂။ တနင်္လာ … Read more
Categories ဗေဒင်နက္ခတ် Leaveacomment
(7)ရက်သားသမီးများအတွက် အချစ်ကံကြမ္မာ စိတ်နေစိတ်ထား
(7)ရက်သားသမီးများအတွက် အချစ်ကံကြမ္မာ စိတ်နေစိတ်ထား Like and Shareပေးကြပါ😘 💞 တနင်္ဂနွေသားသမီးများ 💞 ချစ်သူက သစ္စာဖောက်ခံရတက်သည်။နစ်ယောက်တွဲ ခံရတက်သည် ။အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှုလွဲပြီး ဒေါသရှေ့ထားကာ စကားများရတတ်သည်။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပင်ဖြစ်မည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေတပြေဖြစ်မည်။ချစ်သူကြောင့် စိတ်သောက ရောက်မည်။ စိတ်ညစ်မည်။ချစ်သူကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတက်သည်။ စနိုက်ကြောင့် ရည်းစားဟောင်းကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် စိတ်ပူရတက်သည်။အဆင်ပြေရင် ခဏ ပြီးရင် အဆင်မပြေပြန်ဖြစ် ပြတ်လိုက် ဆက်လိုက်ဖြစ်တက်သည်။ အချစ်ရေးကံမြင့်သင့်ပါတယ်။Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည် 💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား….. 💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား…………….. 💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား………………… 💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား…………. 💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber) 💞 တနင်္လာသားသမီးများ … Read more
ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီး အစိမ်းသေခဲ့ရတဲ့ သနားစရာ ချစ်သူစုံတွဲ (နှလုံးရောဂါရှိပါက မဖတ်ရ)
ကျွန်တော် တို့ အိမ်မှာ ဆွေရိပ် မျိုးရိပ်မကင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ကို အမေ က အိမ်မှာ ခေါ်ခိုင်းတယ်ဗျာ အဲ့ အေ ဒ်ါကြီးက သန်လျှင် နတ်စင်တစ်ရာဘက်ကနေ အလုပ်လာလုပ်တာ။ ကျွန်တော် ထင်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ လလောက်ဖြစ်မယ် အဲ့နေ့က ကျွန်တော် က အိမ်အောက်ထပ် ဆင်းပြီး ဂျာနယ်ဖတ်ေ နတုန်း သူက ကျွန်တော့်ကို စကားလာပြောတယ် … (ကျွန်တော် သရဲ အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကို အဲ့အဒေါ်ကြီး ကသိ တယ်လေ) “သား ညတုန်းက ဒေါ်ကြီးတို့နားမှာ ည ၁၁ နာရီကျော်လောက်ကြီး ကားတိုက်မှုဖြစ်တယ် သားရေ။ ဒေါ်ကြီးတို့ အိပ်ခါနီး ဒုန်းးးးးးးးးးးးး ဆိုပြီး အသံကြားလိုက်တယ် အဲ့ဒါနဲ့ ဒေါ်ကြီးနဲ့ မင်း … Read more
Categories ဖြစ်ရပ်မှန် Leaveacomment
မသေနိမိတ်ပြလေပြီ …ဆရာတော်ကြီးကို မီးသဂြိုလ်ရန် ထားရှိခဲ့သော သနပ်ခါးတုံးမှ အပင်ထွက်လာခြင်း
မသနေိမိတျပွလပွေီ …ဆရာတျောကွီးကို မီးသဂွိုလျရနျ ထားရှိခဲ့သော သနပျခါးတုံးမှ အပငျထှကျလာခွငျး မသနေိမိတျပွလပွေီကြောကျပနျးတောငျးမွို့နယျ ဆညျပေါကျအုပျစု အငျးခြောငျးရှာမွောကျကြောငျး သကျတျောရှညျဆရာတျောဘုရားကွီး ဘဒ်ဒန်တက်ကဿရိယ ပုပ်ပါးအငျးခြောငျးဆရာတျော သကျတျော ၉၇ သိက်ခာတျော ၇၇ ဝါ ရှိ ပြံလှနျတျောမူခဲ့ရာ ၁၄ရကျမွောကျတိတိ အနံ့မနံခွငျး ဆရာတျောဘုရားကွီး မီးသဂွီုလျရနျ ထားရှိခဲ့သော သနပျခါးတုနျး တဈတုနျးမှ အပငျထှကျလာခွငျး တို့အား အမြားသူငါဖူးမွျောနိုငျပါစရေနျ တငျပွလိုကျပါတယျဆရာတျောဘုရားကွီး၏ သီလ သမာဓိ ပညာဂုဏျတို့အားပူဇျောကနျတော့ပါ၏….။ zawgyi မသေနိမိတ်ပြလေပြီ …ဆရာတော်ကြီးကို မီးသဂြိုလ်ရန် ထားရှိခဲ့သော သနပ်ခါးတုံးမှ အပင်ထွက်လာခြင်း မသေနိမိတ်ပြလေပြီကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဆည်ပေါက်အုပ်စု အင်းချောင်းရွှာမြောက်ကျောင်း သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တက္ကဿရိယ ပုပ္ပါးအင်းချောင်းဆရာတော် သက်တော် ၉၇ သိက္ခာတော် ၇၇ ဝါ ရှိ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ရာ ၁၄ရက်မြောက်တိတိ အနံ့မနံခြင်း … Read more
Categories ကြားသိရသမျှ Leaveacomment
” စော် “အထာမှာ ဆရာကျတဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့မာယာဆိုတာ.. မိန်းကလေးတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်…
မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ယောက်ျားတို့ မာယာ ” Propose လုပ်နေဆဲကာလမှာ… ( ၁ )သေမလိုရှင်မလို Feel ပြတယ်…. ( ၂ )ရင်မခုန်ဘူး ဒါပေမယ့် ရည်းစားရချင်ဇောနဲ့… ( ၃ )ဟတ်ဟတ်ထိုး ကြွေချင်ယောင်ဆောင်ပြတယ်… ( ၄ )စိတ်မပါဘဲနဲ့လည်း အသည်းအသန်ဂရုစိုက်ပြတယ်… ( ၅ )လိုချင်တဲ့Targetမရောက်မချင်းအမိန့်တွေနာခံဖို့ဝန်မလေးဘူး… ( ၆ )လိုအပ်ရင် မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးဇီးရွက်လောက်လုပ်ပြမယ်… ( ၇ )တစ်ဖက်က သနားစိတ်ဝင်သွားအောင်မျက်နှာလေးညှိုးပြမယ်… ( ၈ ) ဖုန်းဆက်ချိန် စာပို့ချိန် တိကျတယ် Right time ဘဲ… ( ၉ ) Reply မြန်ချက် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အရေးတယူပြန်တယ်… ( ၁၀ ) ဘာလုပ်နေလဲ … Read more
“ရှင်ဘုရင် တော်ကောက်ခံရမယ့် မိန်းမတွေဟာ…သူတောင်းစားတွေနဲ့ လွဲတတ်ပါတယ်”
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ… ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ… ဟုတ်တယ်.. မထူးဆန်းဘူး… ထူးဆန်းတာတာကတော့…အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ…ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ…တန်ဖိုးမထား…ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ်…ချောင်ရင်နှိုက်…ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့…အဲဒါ….ထူးဆန်းနေပြီ… ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ…တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက…ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို..ပထမဦးဆုံး…သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ်….. ဒုတိယ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်တယ်….တတိယ…သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကို ဒေါသထွက်တယ်အခုတော့…အဲလို (၃) မျိူးသော ဒေါသတွေ မရှိတော့ဘူး..ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းဟာ…ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးမှ ဖောက်ပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူး… သူ့ရဲ့ မွေးရာပါ အငုံ့စိတ်ကိုက သူ့အသွေးအသား အတွေးထဲမှာ ပါလာခဲ့ပြီးသားပါ…အခွင့်အရေး မကြုံလို့သာ…သူလုပ်ခွင့်မရခဲ့တာပါ…ဒါကြောင့်…ကိုယ်နဲ့မယူခင် Single ဘဝမှာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို … Read more
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ
မိနျးမ တဈယောကျရဲ့ အကုသိုလျကံ လောကမှာ ယောကျြားနဲ့ မိနျးမ တှကွေုံ့ဆုံကှဲ ဖွဈကွရတာ ဓမ်မတာပါ… ဘာထူးဆနျးလို့လဲလို့ မေးခငျြစရာ… ဟုတျတယျ.. မထူးဆနျးဘူး… ထူးဆနျးတာတာကတော့…အဲဒီမိနျးမတဈယောကျဟာ…ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာမရှိ…တနျဖိုးမထား…ကိုယျ့အပွငျ အခွား အခွားသော မိနျးမတကာ မိနျးမတှကေို လဈရငျတှယျ…ခြောငျရငျနှိုကျ…ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ယောကျြားကို ရထားပွီဆိုရငျတော့…အဲဒါ….ထူးဆနျးနပွေီ… ကြှနျမငယျရှယျစဉျ စိတျဓာတျမရငျ့ကကျြခငျကာလတှေ…တရားတှေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပွီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတျခငျကာလတှတေုနျးက…ယောကျြားတဈယောကျ ကိုယျ့ကို ဖောကျပွနျတာ ခံရပွီဆို..ပထမဦးဆုံး…သူ့ကိုဒေါသထှကျတယျဒုတိယ… ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဒေါသထှကျတယျတတိယ…သူနဲ့ဖောကျပွနျတဲ့ မိနျးမကို ဒေါသထှကျတယျအခုတော့…အဲလို (၃) မြိူးသော ဒေါသတှေ မရှိတော့ဘူး..ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ယောကျြားဟာ…ကိုယျနဲ့တှပွေီ့းမှ ဖောကျပွနျတာ မဟုတျပါဘူး…သူ့ရဲ့ မှေးရာပါ အငုံ့စိတျကိုက သူ့အသှေးအသား အတှေးထဲမှာ ပါလာခဲ့ပွီးသားပါ…အခှငျ့အရေး မကွုံလို့သာ…သူလုပျခှငျ့မရခဲ့တာပါ… ဒါကွောငျ့…ကိုယျနဲ့မယူခငျ Single ဘဝမှာ ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ယောကျြားကို ကိုယျနဲ့ယူပွီးမှ … Read more
ဆရာ့အိပ်ခန်းထဲ ၀င်မိသွားတဲ့ တပည့်မလေး အဖြစ်… January 18, 2021
၁၅ရက်တာအတွင်း ငွေဝင်လာဘ်ရွှင် စီးပွားတိုးမည့် ” လိုတရ “ယတြာ January 18, 2021
အရေခွံ ဘယ်လောက်လဲလဲ မြွေဆိုတာ တီဖြစ်မသွားဘူး (မိန်းကလေးတိုင်း ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်) January 18, 2021
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ အဟော January 17, 2021
အညာမှာ အရမ်းပေါတဲ့ ဒီအပင်က ဒီလောက်အထိ စွမ်းသတဲ့လား…. January 17, 2021
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းကလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံး ကျနေပြီ…(မိန်းကလေးတွေ သတိထားဖို့) January 17, 2021
ညီမလေး…အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ် တော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်သွားပါ January 17, 2021